साम्राज्ञीले फर्काईन् जवाफ : 'आजका नारीहरु यति कमजोर छैनन्' - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २२, २०७७ समय: १२:३५:०६
ईटहरी/ नेपाली सिने जगत यतिबेला हरेक विवादले चर्चामा छ । पुजा शर्मा, सुष्मा कार्की, दिपाश्री निरौला, भुवन केसि देखि लिएर साम्राज्ञि राज्यलक्ष्मी शाह यो लकडाउनको चर्चित र विवादित सेलिब्रेटी हुन् । अन्य विवाद बिस्तारै साम्य हुँदै गएपनी भुवन-साम्राज्ञीको बिवाद भने टुङिने मेलोमेसो छैन । यस्तै भुवनले कलाकार संघमा निवेदन दिएसंगै फेरि आरोप प्रत्यारोप लगाए कानुनी रुपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिएपश्चात् चुप बसेकी साम्राज्ञी फेरि बोलेकी छन् । तर उनको यो पटकको बोलाई भने अलि फरक छ ।
उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा एक लामो स्ट्याटस पोस्ट गरेकी छन् । जहाँ ‘जो जसलाई सम्बन्ध छ’ भनेर सुरु गरिएको छ भने ‘नेपाली चलचित्रको एक सुभचिन्तक’ भनेर अन्त्य गरिएको छ । अर्थात यो पटकको जवाफ फर्काईमा भने एक सुभचिन्तक बनिन् । उनले पोस्ट गरेको यो पस्टलाई आफैले लेखेको हैन भन्दै प्रतिक्रिया समेत आईरहेको छ । हेर्नुस् उनको पोस्ट जस्ताको त्यस्तै :
जो जसलाई सम्बन्ध छ ! हालै नेपाली सिने जगतका एक वरिष्ठ कलाकार,निर्माता र निर्देशक ज्युले एक नव कलाकारले सामाजिक संजालमा दिएका अभिव्यक्ति प्रती आपत्ती जनाएर आफुले पनि सामाजिक संजालमा गर्नु भएको प्रतिक्रिया सन्दर्भमा !
के एउटा नव प्रवेशी कलाकारले आफ्ना शुरुको संघर्षका दिनहरूमा भोग्नु पर्ने अदृश्य उत्पीडन,वास्तविक अप्ठ्याराहरु र आफुलाइ मै हु भन्ने निर्मताहरुको हेपाहा प्रवृत्तिको र दुर्ब्यवहार बारेमा अभिव्यक्त गर्न पाइन्न र ? त्यस्ता वास्तविकता हरुलाइ कसैले आफ्नो प्रतिष्ठाको बिषय बनाउनु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ !
यौटा वरिष्ठ कलाकारले जुनियर कलाकारलाइ होच्याएर सामाजिक संजाल अनेक थरी भन्नू कहाँ सम्म उचित हो? केहो वरिष्ठ र प्रतिष्ठित ब्यक्ति भनेको ? आफुलाइ इज्जतदार ठान्नेले सामाजिक संजालमा प्रयोग गर्ने भाषा त्यही हुन्छ? तपाईको बोलचाली र आनिबानीले तपाईंलाई समाजमा प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ ख्याल राख्नुस ! कुनै पनि कलाकारले स्वयं उस्ले गरेको मेहनत र लगनले कुनै स्थानमा पुगेको हुन्छ जुनकुराको भुक्तभोगी तपाईं स्वयं हुनुहुन्छ भने कुनै ब्यानरको एक फिल्म चल्दैमा सोहीलाई बेचेर पछीका पाएको भन्ने तर्क बिल्कुलै मिल्दैन ! नव कलाकारहरुलाइ कम पारिश्रमिक दिई तिनिहरुबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिने चलन कहिले सम्म हुने हो? कलाकारले प्राप्त गरेको उचाई फगत एक अनुग्रह होईन, उनको लगन र मेहनतको फल नै हो !
फेरि अब उप्रान्त यसो गरेमा वा कुनै अप्रिय कुरा अभिव्यक्त गरेमा कानुनी उपचार तिर जान सकिने कुरामा देशको एक नागरिकको हिसाबले कसैले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनु उस्को संविधान प्रदत मौलिक हक हो, त्यस्मा कसैले बाधा अड्चन गरेमा स्वयं कानुनी कार्वाहीमा पर्न सक्ने कुराको ज्ञान् हुनु जरुरी पनि छ।
आजका नारीहरु यति कमजोर छैनन् कि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नसकुन चाहे त्यो सामाजिक हिसाबले ले होस् या कानुनी हिसाबले ! आजका महिलाहरु हरेक हिसाबले सबल छ्न् भन्ने कुराको हेक्का राखौ !
यदि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाइ बिकास गर्ने हो भने सबै निर्माताहरुले आफुलाइ मै हु भनी भावना नराखी नव कलाकार प्रती गरिने ब्यवहारमा सुधार गर्नु पर्छ। साथै समुहगत स्वार्थ राखी स्थापित कलाकार प्रति पक्षपात ब्यवहार र गुटबन्दी गरी फिल्महरु खेल्न नदिइ फिल्मी क्षेत्र बाटै पलायन गराउने षड्यन्त्र बाट मुक्त समेत हुनु पर्छ ! होइन भने यस क्षेत्रलाई नै क्यारिएर बनाएर यस क्षेत्रमा आउन खोज्ने पढेलेखेका र योग्य कलाकार हरुको खडेरी हुने र स्थपित कलाकारहरु बिस्थापित हुनेको लर्को लामै हुन्छ ! तसर्थ सबैले आ-आफ्नो भुल स्वीकार गरि आफ्नो कमि कमजोरीहरु लाई मनन गरि त्यसमा सुधार गरीअघि बढ्नु जरुरी छ ! साथै संबंधित निकायले निष्पक्ष रही यस बारेमा गम्भीरता पुर्वक सोच बिचार र अध्यन गर्नु पर्ने नितान्त आवश्यक छ ! नेपाली चलचित्रको एक शुभ चिन्तक !